Sawirro:-Wasiirka Gaashaandhigga oo kormeer ku tagay Xerada Gen.Gordan ee Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro:-Wasiirka Gaashaandhigga oo kormeer ku tagay Xerada Gen.Gordan ee Muqdisho
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xil.Xasan Cali Maxamed oo ay wehliso Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Marwo Aamina Siciid ayaa waxa ay kormeer ku tageen Xarunta Tababarada General Gordan ee Muqdisho,taas oo hore Gacanta ay ugu heysay dowladda Imaaraadka Carabta, Balse ay la Wareegtay dowlada Federaalka Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa xog-wareystay Taliska Guutada 14 Octoobar ee Degan Xaruntaas,isla markaana ku dhiirageliyay shaqada qaranka ay u hayaan.
Sidoo kale Xasan Cali Maxamed ayaa Sarakiisha u sheegay in dowladda ay hogaaminayaan Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre hore ay u balanqaadeen in dowladu Dabooli Doonto .”Waxaan Arkayaa in Balanqaadkii uu fulay oo Dowladu ku guuleysatay Waana Guul weyn”ayuu yiri Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga.
Dhanka kale Marwa Aamina Siciid ayaa xustay in Madaxtooyatu ay kala shaqeyndoonto Bilicda Xarunta Taliska Guutada 14 Octoobar.
Faah faahin:-Dil ka dhacay Xaafad ka tirsan Muqdisho